Xaaladda Magaalada Diri-dhaba oo Foolan. – Xeernews24
Xaaladda Magaalada Diri-dhaba oo Foolan.
25. Dezember 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Waxaa shalay abaarihii 11:00 subaxnimo ee waqtiga bariga afrika dagaal gacan kahadalihi ku dhexmaray xaafada malkaajabtu ee duleedka diridhaba dad kasoo jeeda qoomiyada Oramadda iyo Soomaalidda ee iska leh magaalada iyo deganka.
Hadaba dagaal kan oo aan sababin wax dhimasho ah ayaa ka dhashay daandaansi ay dad oramo ahi tuuryo ku bilaabeen dad soomaali ah oo qabri ka soo dareeray. Waxaa laysu adeegsaday budhadh, dhagaxaan iyo tooriyo waxaana hilfaha loogu qaaday oramadiina guryahana ay isku soo xidheen. Ciidamada fadaraalka ayaa lawareegay nabadgaliyada goobta dagaalku ka dhacay.
geesta kale Magaladda Dire Dhebe ayaa lagu soo waramaaya inay ku soo galeen si qarsooddi ah ciidamu iska dhigey in ay ka tirsanaa ciidanka Dawladda dhexe ee Federalka Itoopiya laakiin ahaa ciidan Oromadda.
Askartan oo qaarkood isku soo egeysiiyey dadka shacabka ee radyidka oo ayagu hawshooddo ahayd inay warar qarsooddi ah ka fuliyaan magaalaadda Dire Dhebe ayaa gacanta lagu dhigay isla habeenkiiba.
ciidan la qabtay waxay isugu jira haween iyo rag oo ayago dharka shacabka soo xidhay si ay uu fuliyaan fal dambiyo iyo arimo la xidhiidha argagixiso dil iyo xad gudub ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladooda Diri-dhab.
Dhinaca kaley waxaa la sheegaya in ciidanka fedaraalka Ethiopia ee fadhi kiisu ahaa magalaadda Huursa oo qiyaasti 30km uu jirtay magaalada Diriba ay yihiin ciidankan ka tirsan ama badankoogu ka soo jeeddo qowmiyadda Oromadda ahna ciidanka qaska iyo qalalaasa ka hurinaaya gobolka Sitti iyo is maamulka Magaalada Diridhaba.
Waxaan odhan karna qowmiyadda Oromaddu waxay ku dhaqaadey oo ay ku tala gashay xoog la xidhiidha is mood siis.
Waxa lakiin u diraynaa in xarago kibirka lagu kuffo oo ay noqoneyn sidda ay wax u xisaabisay oo ay ka duwanaaneyso xaaladdo.
Weli dhinaca Somaaladda gaar ahaan reer Sitti wax aan is difaac ahayn lagama soo sheegin oo ugu jawaabeen daadaansiga iyo is cajabinta ay qowmiyadda oromaddu ku wada.
Soomaalidda magaalooyinka Diri-dhaba iyo Malkaa-jabtii xaaladda ay maanta ku sugan yihiin waa mid xasuusin karta xaaladdi ay ku sugnaayeen sannadkii 1991 markii talada dalka Ethiopia laga tuuray gacan ku dhiiglihii Mengistu oo ay sidaan oo kalee Oromaddu uu Qooqday iyo wixii lagu kala calaf qaaday.
Tigreega maanta ka caban duulanka iyo kacdoonka Oromadda iyagaa ku beeray magaalada Diri-dhabana iyagaa gacanta Oromadda u galiyey.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/xog-muhiim-ah.jpg 201 251 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-25 12:36:222017-12-25 14:12:19Xaaladda Magaalada Diri-dhaba oo Foolan.
Madaxweynayaasha Turkiga iyo Suudaan oo kala saxiixday Heshiisyo iskaashi. Daanyeer Sababay isku dhaca Labo Qabiil & Dagaal Khasaaro geystay oo dhacay...